" ဖြိုးလေးနဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး တို့ စုံတွဲ ခေါ်ခဲ့တဲ့ အင်္ကျီချင်းလဲဝတ်တဲ့အခွီ Challenge ကို လက်ခံလိုက်တဲ့ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောင်နှံ " - Cele Connections
” ဖြိုးလေးနဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး တို့ စုံတွဲ ခေါ်ခဲ့တဲ့ အင်္ကျီချင်းလဲဝတ်တဲ့အခွီ Challenge ကို လက်ခံလိုက်တဲ့ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောင်နှံ “
Candy | 16/04/2020 | Celebrity | No Comments
CeleConnectionsပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်မိုးမိုးကတော့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲကို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကျော်ထဲက ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တစ်ဦးပါ။ သူရဲ့ကျော်ကြားတဲ့သီချင်းတွေထဲက “အသက်လေးဆယ် ” သီချင်းဟာလည်း ပရိသတ်တွေအသက်အရွယ်မရွေးယခုချိန်ထိပါးစပ်ဖျားမှာစွဲစေတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ယခုဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ Covid 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိပ်ဆုံးကနေ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အပြင် တကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုဝေမျှလျက်ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။အမြဲပျော်ရွှင်ရယ်မောပေါ့ပါးစွာနေတတ်တဲ့ မိုးမိုးကတော့ လက်ရှိမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားနဲ့သမီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကာ ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ” Challenge Accepted ပါPhyo Layy နဲ့ Warso Moe Oo. Jue Chit Thinzar နဲ့ အစ်ကိုရေ တစ်ယောက်ထဲတော့အရှက်ကွဲမခံပု ” ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ ပျော်စရာ TikTok Challenge လေးကိုလက်ခံခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျရင် မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Source :Moe Sithu Kyaw
” ဖွိုးလေးနဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး တို့ စုံတှဲ ချေါခဲ့တဲ့ အင်ျကြီခငျြးလဲဝတျတဲ့အခှီ Challenge ကို လကျခံလိုကျတဲ့ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောငျနှံ ”
ဒီနမှေ့ာတော့ ” Challenge Accepted ပါPhyo Layy နဲ့ Warso Moe Oo. Jue Chit Thinzar နဲ့ အဈကိုရေ တဈယောကျထဲတော့အရှကျကှဲမခံပု ” ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ ပြျောစရာ TikTok Challenge လေးကိုလကျခံခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောငျနှံရဲ့ ဒီယိုဖိုငျလေးကိုကွညျ့ပွီးသဘောကရြငျ မှတျခကျြတဈခုခုပေးခဲ့ပါဦးနျော။
“တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ သူမရဲ့ မုသား Music Videoလေးကို ကြည့်ရှု့သူ (2.9)M ကျော်ရရှိခဲ့လို့ ပျော်ရွှင်ကာ ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ရတနာမိုင်”